नेताले भन्ने प्रहरीले गर्ने यस्तो छ कानुन र यस्ता गुलामी गर्नेले प्रहरीले नै रविलाई प*क्राउ गरेका थिए ! - Nepal Insider
Home/समाचार/नेताले भन्ने प्रहरीले गर्ने यस्तो छ कानुन र यस्ता गुलामी गर्नेले प्रहरीले नै रविलाई प*क्राउ गरेका थिए !
नेताले भन्ने प्रहरीले गर्ने यस्तो छ कानुन र यस्ता गुलामी गर्नेले प्रहरीले नै रविलाई प*क्राउ गरेका थिए !
नेपाल प्रहरीकै चर्चित नाम पुर्व प्रहरी अधिकारि रमेश खरेलले आजको स्तिथिमा आफ्नो कुरा राख्दै निर्मला पन्तको विषयमा भने कि नेपालको सिआइबि धेरै राम्रो हुन्थ्यो र अहिले सम्म रिजल्ट पनि आउंथ्यो । तर दुर्भाग्य के हो भने तेसैमा खटिएको मान्छेलाई निलम्बन गरियो । यो धेरै नै निराशाजनक कुरा हो ।
रवि लामिछानेको विषयलाई लिएर रमेश खरेलले भन्नुभयो रवि लामिछानेको केसमा पनि अनुसन्धान गर्दा हेर्न पर्ने तेस्को कुनै हात छ कि छैन । यो केसमा ओरु पनि सबै हेरेर पक्रिनु पर्थ्यो । कानुन भन्दा माथि कोहि पनि होइन । तर रवि लामिछानेको केसमा पनि त्यो गरिएन कतै पनि अनुसाशन र काम गर्ने शैली देखिएन ।
आज देखे अनुसार त् के देखिन्छ भने प्रहरी कार्यकर्ता झैँ व्यवाहार गरेका छन् । खै कार्यकर्ता भएका हुन् कि ? कहिले फेरी लाग्छ प्रहरी नेताहरुको आदेशको पालना गर्नका लागि मात्र हो कि ? कता कता मलाई यस्तै लाएको लाग्छ भन्नुभयो रमेश खरेलले । उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि अब काम गर्न खोज्ने प्रहरीलाई नै निलम्बन गरेपछि ओरुलाई काम गर्ने जाँगर कता बाट आउने ? यो पनि कमजोरी हो ।
रमेश खरेलले मैले २९ वर्ष जागिर गरे तर आफु कहिले पनि झुकेर काम गरिएन । किसानको छोरो डीआइजी सम्म बने ओरु के चाहियो ?कसैको चाकरी गर्न मलाई आउन्न अनि आफै आफ्ना इच्छाले जागिर छाडेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँ संग को उक्त कुराकानी आगाडीको यस लिंकमा https://www.youtube.com/watch?v=FpcnEKT2tGc गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
एसएलसी पासलाई सरकारी जागिर खाने ठुलो अवसर